Fahasalamana : misoroka ny mety hisian’ny aretina pesta ny CRM | NewsMada
Nanomboka ny faran’ny herinandro teo, nandaraka fanafody hiarovana ny mety hisian’ny valanaretina pesta ny Croix Rougr malagasy. Natomboka teny Andrefan’Ambohijanahary hatrany Tanjombato izany.
Natao izao hetsika izao ho fiarovana ny fahasalaman’ny mponin’Antananarivo manoloana ny loto sy ny fakobe misavovona raha ny tatitra voaray. Manodidina ny 20 ireo mpilatsaka an-tsitrapo manatanteraka ny fandrarahana fanafody.
Tanjona ny famonoana ny otrikaretina izay mety hiparitaka sy miaro amin’ny fisian’ny valanaretina ateraky ny loto toy ny pesta. Na izany aza, efa betsaka ireo ankizy ampijalian’ny aretin-tratra vokatr’izany fakobe izany.
Nandritra ny telo volana, miaritra ny mafy vokatry ny fako ny mponin’Antananarivo. Tsy hay hodiavina ny lalana rehetra. na ny mpampiasa fiara na ny mpandeha an-tongotra samy miferinaina amin’ny fako mibahan-dalana.
Ireo mponina mipetraka manodidina ny tobim-pako moa voatery mifindra monina mihitsy indrindra ireo manana zazakely noho ny fofona ratsy tsy azo iainana ateraky ny fakobe misavovona.
Nisy ihany ireo toerana efa tsikaritra ho nandalovan’ny kamiaoben’ny Samva ka nadiodio saingy mbola betsaka ihany koa ireo toerana lavitr’andriana. Tafiditra anatin’izany ny toerana tsy dia andehanan’ny minisitra sy ny olom-panjakana loatra toy ny eny Ambatolampy sy ny eny 67 ha.